Semalt: Kungani Okuqukethwe Okubalulekile Kubalulekile Kwiwebhusayithi Yakho ne-SEO
Eqinisweni, izinjini zinezimpembelelo ezinkulu ngendlela amawebhusayithi okufanele abe ngayolakhiwe. Izinjini eziningi zokusesha zibeka ugcizelele kwikhwalithi yokuqukethwefuthi ibuyekeze ngezikhathi ezithile. Ngakho, ukuze uhlale ufanelekile, kufanele ubuyekeze okuqukethwe kwakhonjalo - multinational companies in beirut lebanon. UJulia Vashneva, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt Amasevisi Edijithali,uchaza ukuthi kungani okuqukethwe okusha kuyisici esiyinhloko esibangela impumelelo yakho kuwebhusayithi.
1. Ukukhahlaza Ngokuvamile Ngezinjini Zokusesha
Uma ngabe iwebhusayithi yakho ivuselelwa njalo ngezihloko ezintsha namakhasi ewebhu, ke injini yokuseshaabakwa-crawlers bazovakashela lelo sayithi njalo. Kusho ukuthi ukufakwa kwe-site yakho kuyothathaNgokushesha. Lapho izinjini zokusesha zivakashela isayithi lakho njalo, ungafinyelela ezikhundleni eziphakemeuma okuqukethwe kwakho kuyigugu. Noma nini lapho ungeza okuqukethwe okusha kuwebhusayithi yakho, izinjini zokuseshaqaphela lokho bese uhlele kabusha isimo sesayithi lakho. Ngakho, buyekeza iwebhusayithi yakhonjalo ukwandisa amathuba okuthola indawo ephakeme.
2. Ukwandisa Amandla Ewebhusayithi Kungenzeka
Isu elibalulekile lokukhulisa igunya lewebhusayithi yakho lenza okuqukethwe okuningi.Shicilela okuqukethwe okubaluleke kakhulu, okusesikhathini, futhi ngokuqinisekile uzonikeza isayithi lakhoigunya elikhulu elingenzeka..Uma wenza ukubuyekeza kwamasayithi e-niche yakho, wenabazobona ukuthi banezinkulungwane zamakhasi ezikhokhwe yi-Google. Uma ukhonabazimisele ukujoyina i-ligue yabo, khona-ke kufanele ushicilele okuqukethwe okuhlobene kakhulu. Uma ungokungahambisani nokubhala okuningi okuqukethwe ngesihloko esithize, uzothola ukwethemba kusukaabantu kanye nezinjini zokusesha. Isikweletu samandla esayithi lakho sizokhula njengoba utholaathembele okuningi nokuningi. Yakha idumela lakho ngokusebenza emapulatifomu wezokuxhumana nezenhlalo.
3. Okuqukethwe Okunye Kusho Amagama Angukhiye Abengeziwe
Uma udala okuqukethwe okusha njalo, isayithi lakho lizoba namagama angukhiye amaningi. Ngokudala igama elingukhiyeizihloko ezigxile, uzothola ithuba lokukhomba izivakashi eziningi. Izinjini zokuseshauzophinde aqaphele isayithi lakho futhi akuthumelele izivakashi eziningi. Ngisho noma i-Google ayisisekeloisisindo esikhulu kunani lamagama angukhiye kwiwebhusayithi yakho, kusabalulekile ukumaamagama angukhiye ngaphakathi nangakuzungezile isihloko sakho. Amagama angukhiye asetshenziswa yizinjini zokuseshaisayithi esekelwe ngendaba. Khumbula ukuthi ungafaki isihloko sakho ngamagama angukhiye njengalokhuuzokwehlisa izinhlawulo zezinhlawulo zocingo.
4. Gcina abafundi bakho baziswa
Izibuyekezo ezijwayelekile zizogcina abhalisile bakho nezivakashi kusesimweni nemicimbi kanye nezinguqukoembonini yakho. Okuqukethwe okusha kunamandla okuguqula izivakashi ezintsha kumakhasimende.Ngokushicilela ulwazi olusha njalo, uzogcina izithameli zakho zihlanganyela. Lokhu kuthandauzuze ubuqotho besikhathi eside kusuka kumakhasimende, ngakho-ke isayithi lakho lizokhula ekuthandeni futhiusezingeni. Nikeza izivakashi zakho ngolwazi oluqinisekisayo mayelana nemikhiqizo namasevisi wakho.Tshela izivakashi zakho ngezinzuzo zemikhiqizo yakho nokuthi kungani zidinga. Uma uunikeze ulwazi olwanele kumakhasimende angakhona, ubasiza ukuba bakhethe kahle,futhi kungenzeka ukuthi bazothenga imikhiqizo yakho.